Iinkunzi ze-GBPJPY Zisebenzisa Amandla KwiNdlela yeBearish
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPJPY-nge-3 kaDisemba
Iinkunzi ze-GBPJPY zisebenzisa amandla ngaphaya kwendlela yokubuyela kwi-151.870. Ummandla obalulekileyo usebenza njengendawo ephambili yeempendulo ezininzi. Iimpendulo zemarike ziquka impembelelo ye-bullish-shaped njengoko ilungele ukuchaphazela isenzo sexabiso lemarike. Ixabiso, ngoko ke, liqukethe amanqaku amaninzi empendulo yabathengi kunye nabathengisi njengoko samkela i-pullback enkulu, ihoxisa kwinqanaba elibalulekileyo. Okwangoku, ummandla wemarike uphela usaxhatshazwa ziibhere kulandela intshukumo ehlayo.
Imimandla ebalulekileyo ye-GBPJPY:
Iindawo zokuchasana: 158.310, 154.500
Iindawo zokuxhasa: 151.870, 149.300
I-GBPJPY yexesha elide iTrend: Bullish
Ngaphambi kokuqwalaselwa kwexabiso kwiseshoni yebhere, bekukho iimvavanyo ezininzi ezibethwe kwindawo ethile ye-149.300 level. Lo mmandla kwimarike usebenza njengenqanaba lesiphelo apho umgangatho wexabiso ubonwa uwela kuwo. Ixabiso, ke ngoko, liqale lafumana ukuhamba okubalulekileyo komyalelo kweli nqanaba. Njengoko iinkunzi zeenkomo zibandakanyeka emarikeni kweli nqanaba, abathengisi nabo bazisa imarike phantsi kufuphi neli nqanaba, kwaye le nkqubo yaphindwa ixesha elide ngaphambi kokuvukela kweenkunzi. Emva kokuphindaphinda kweli nqanaba le-149.300 elibalulekileyo, bakhetha indlela yabo eya phezulu, belandela amandla abo okukhawuleza.
Ixabiso le-GBPJPY ligqitywe ngamabhere malunga nenqanaba le-158.310 lokubaluleka. Ekugqibeleni iibhere zenza indlela yazo yokubeka ixabiso ezantsi. Intshukumo yamaxabiso ifumene ukwehla okukhulu ukuya kumanqanaba ahlukeneyo okubaluleka njengoko iinkunzi nazo zinqwenela ukusebenzisa amandla azo kwimarike. Abathengisi ekugqibeleni babuyela kwinqanaba le-149.300 lesiphumo, kwaye iinkunzi zeenkomo zazilungele ukuhoxisa ixabiso ngokuchasene nomzila we-bearish kwindlela yokuthengisa. I-RVI (i-Relative Volume Index) ibonisa ukwanda kokusabalalisa umthamo ohambelanayo njengoko i-pullback ibonakala kwi-chart yosuku lwe-1.
I-GBPJPY yeXesha eliFutshane leNdlela: Bullish
Itshathi yeeyure ze-4 ibonisa kwakhona into enkulu kwisakhiwo semarike. Ixabiso liwela kwi-bearish trend ukuya kwi-149.300 iphuzu elibalulekileyo. Iinkunzi ngoku zibonwa ziwaphakamisela phezulu amandla azo kwindlela yabathengisi. Isalathisi se-Moving Crossing sibonisa imigca emibini yesignali yokuhlamba phezu kwamanqanaba exabiso ngaphandle komnqamlezo ukubonisa ukuba imarike iseyi-bearish njengoko silindele ukuphindaphinda kwinqanaba lexabiso le-151.870 ngaphambi kokuzibandakanya kweebhere.
tags Itshathi yemihla ngemihla, Forex Analysis Technical, GBPJPY, Ulindelo lweNtengiso, Price Action
I-GBPJPY Schemes Ixabiso lexabiso lamandla asezantsi ngenxa yokungaphumeleli kweBulls
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPJPY-Novemba 29
Izikimu ze-GBPJPY zamandla exabiso ngenxa yokungaphumeleli kwenkunzi yenkomo ngaphezu kwe-154.200 inqanaba lokumelana. Abatyali-zimali ababekho kwimarike bayeka ukuthenga, nto leyo ebangele ukukhatywa kwexabiso malunga ne-154.200. Nangona kunjalo, ukuba iinkunzi bezizimisele ngokwaneleyo, ixabiso beliya kugqabhuka kulo mqobo kwaye likhawuleze ukuya kwinqanaba lokumelana ne-156.100. Ukulandela ukukhatywa kwexabiso lemarike eliveliswa ziinkunzi, abathengisi ngoku banoninzi lwamandla emarike. Ngenxa yoko, ukuhamba kwexabiso le-GBPJPY kusetelwe ukuthambekela ezantsi njengoko amandla eqokelela.
Inqanaba le-GBPJPY lokubaluleka
Amanqanaba okumelana: 156.000, 154.200
Amanqanaba enkxaso: 151.000, 149.100
I-GBPJPY yexesha elide iTrend: Bearish
Uyilo lwe-GBPJPY lwavela kunye nokubandakanyeka kweemarike zombini iinkunzi zeenkomo kunye neebhere. Zombini iimarike zinomdla kuqala ekuhambeni kwamaxabiso emarike. Njengoko izandla zozibini zijika amaxabiso phezulu naphantsi, imarike ihamba ngexesha lokunyuka nokuhla. Abathengi bagcina amandla abo ngenxa yemeko yokuqokelela, kwaye ixabiso laphakanyiswa phezulu. I-GBPJPY yenyuka phezulu, yaphula ngaphaya komqobo ongundoqo we-156.000. Xa iinkunzi zenkomo zichithe amandla azo, abathengisi bangenelela ukuze basebenzise impembelelo yabo emarikeni.
Izikim zentengiso amaxabiso ehla ngokuqukuqela ngamandla kwamandla. I-bearish trend, nangona kunjalo, yavela kule nqanaba njengoko ixabiso lilandela ukuhamba okubalulekileyo okuhla. Ulwakhiwo lwexabiso luhamba kunye ne-bearish liquidity order flow kwimarike. Ukuhamba komyalelo wexabiso kuphinda kuhlolwe kwakhona kufuphi nenqanaba lexabiso le-154.200 ngaphambi kokuphindaphinda. Oku kwenzeke ngenxa yokusilela kwabathengi ukunyusa amaxabiso. Uluhlu oluphakathi lwe-Bollinger Band kwi-chart yosuku lwe-1 lubonisa ukuhamba kwexabiso lexabiso. Iibhere ziphinde zaliphinda le nqanaba ngaphambi kokuwa, kwaye oku kubonisa ukuqhubeka kwe-bearish.
I-GBPJPY yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Qalisa
Ukunyakaza kwexabiso kuwela kufuphi nenqanaba elibalulekileyo le-154.209 kwitshati yeeyure ze-4. Ixabiso liyaqhubeka liqhubela phambili phantsi njengoko i-Relative Volatility Index ibonakala ihla kwinqanaba le-40.00. Ukunyakaza kwe-bearish kumiselwe ukuqhubeka nokuphula kwinqanaba lenkxaso ye-151.000.
tags Itshathi yemihla ngemihla, GBPJPY, Ulindelo lweNtengiso, Price Action, Uhlalutyo Technical
I-GBP / JPY idibanisa phambili kokuPhumla!
I-GBP / JPY ibini ihamba ecaleni phakathi kwe-154.21 kunye ne-153.49 ye-pivot yeveki. Ngexesha elifutshane, i-Yen iqalile ukuxabisa ngokuchasene neentshaba zayo njengoko iJapan Yen Futures izama ukuphinda ibuyele. Kwakhona, i-JP225, i-Nikkei ibonakala isengozini, ukuhla okunokuthi kubonise ukukhula kweYen.
Ngokusisiseko, i-Yen ifumene uncedo oluvela kwi-SPPI yaseJapan ebhalise ukukhula kwe-1.0% ngokuchasene ne-0.9% elindelweyo. Kuhlala kukubona oko kuya kwenzeka ngokwenene njengoko isibini semali sibanjelwe kuluhlu.
Uhlalutyo lwe-GBP / JPY lobuchwephesha!
I-GBP / JPY ibini ayiphumelelanga ukukhupha ukuchasana okumelelwe ngumgca we-downtrend kwaye ngoku icela umngeni kwinqanaba elisezantsi le-pitchfork (lml). Ukuhlala ngaphakathi komzimba we-pitchfork onyukayo kunokubonisa ukuba ixabiso lisenokuphinda liqalise ukukhula kwalo.
I-153.48 ime njengenkxaso engatshintshiyo. Kuphela lucalucalulo olusebenzayo ngaphantsi kwalo mqobo ungaphantsi onokubonisa ukuhla okunzulu okunokubakho.
Ukuhlala ngaphakathi komzimba onyukayo we-pitchfork kwaye wenze indawo ephezulu ephezulu, ukuvalwa kwe-bullish ngaphezulu kwe-154.21 kunokubonakalisa ukuqhubeka.
tags Forex, IGBP / JPY, Izicwangciso zoRhwebo
Abathengi be-GBPJPY Babaleka iNqanaba lokuLahlwa kweXabiso
Ukuhlaziywa: 19 Novemba 2021
Uhlalutyo lwexabiso le-GPBJPY - ngoNovemba 19
Kwisakhelo sokwakheka kweemarike, abathengi be-GBPJPY bagwema ukukhatywa kwexabiso ngaphantsi kwexabiso le-153.600. I-bullish entanglement kunye nomyalelo wexabiso ivumela iinkunzi zeenkomo ukuba zibe nefuthe elingakumbi kwimarike. Ukongamela kwebhere kumisiwe ngoku njengoko abathengi belungiselela ukuthatha iiodolo zovuyo baye kwindawo ephezulu. Oku kuphakamisa ukuba abathengi babekwe endaweni yokubonisa igunya labo ngokubacenga ukuba baqhubele phambili njengoko ukunyuka kwamaxabiso kuhleli.
Amanqanaba aBalulekileyo e-GBPJPY:
Amanqanaba okumelana: 156.100, 153.600
Amanqanaba enkxaso: 151.000 149.100
Abathengi be-GBPJPY banqanda ukukhatywa kwexabiso ngenxa yokunyuka kwempembelelo yemarike. Iibhere zaqala ngokuncipha ukusuka kwinqanaba elibalulekileyo le-156.100, lilandelwa yi-rally ebukhali ezantsi. Amanqanaba exabiso abalulekileyo yi-153.600 kunye ne-151.000. I-bearish exposure inciphisa ukunyakaza kwexabiso kwi-149.100 yexabiso lentengo, ebonisa ukuba ulindelo oluninzi lokunyuka kwamaxabiso luye lwaphulwa. Iinkunzi nazo zibe negalelo elincinci kwimarike, zizama ukubandakanya imarike kuvavanyo kwakhona kumanqanaba abalulekileyo aliqela.
Ukulandela i-bearish tide ukuya kwi-149.100 uphawu olubalulekileyo, iinkunzi zeenkomo zatshitshiswa esenzweni ngokudubula ixabiso lentengo phezulu. Njengoko isalathisi esihambayo siqinisekisa ngeminqamlezo emikhulu, ukuhamba kwexabiso kuhlanganisana kwiindawo ezininzi. Xa imarike ibuyele kwi-156.100, umyinge ohambahambayo ubonise umnqamlezo we-bearish ukuvela, ebonisa ukuba abathengisi bakulungele ukuchaphazela imarike. I-GBPJPY iwela kwixabiso, kwaye amaxabiso alahlekelwa yisantya. Nangona kunjalo, xa imarike yawela kwinqanaba le-153.000, ixabiso alizange liwe nalo. Ngenxa yoko, abathengi banqanda izinga lokukhatywa kwaye bazimisele ukuqhuba ixabiso.
Itshathi yeeyure ze-4 iqala ukubonisa i-rally phantsi ukusuka kwinqanaba elibalulekileyo le-156.100 ngaphambi kokubuyela emva ngaphaya kwenqanaba le-153.600, elibonisa indawo yokulahla. Iinkunzi ekugqibeleni zaphuncuka kulo mmandla kwaye ngoku zisekiwe ukuba zingene nzulu kwindlela yazo. Isalathisi se-Stochastic Oscillator silinganisa ulwalathiso lwexabiso kwaye amandla omthengisi athathwa ngokuba buthathaka. Ngoko ke iinkunzi zeenkomo ziya kuqokelela ukuze zenze ukuphuphuma kweemarike njengoko ixabiso lizimisele ukunyuka libuyele kwinqanaba lexabiso le-156.100.
I-GBP / JPY yayikwisigaba sokulungisa kodwa ngoku kubonakala ngathi ukuhamba kwezantsi kuphelile. Yiyo loo nto besinokukhangela amathuba amatsha okuthenga. Nangona kunjalo, sifuna ukuqinisekiswa ngaphambi kokuba sithathe ixesha elide. Ngokobuchwephesha, isibini sisephantsi koxinzelelo, ngoko sinokubuya sivavanye kwaye siphinde sivavanye amanqanaba okuxhasa kwangoko.
Esi sibini siyaqhubeka nokuhlala sisezantsi njengoko idatha yase-UK ingene ixutywe izolo. I-GDP ye-Prelim, iBalance Trade Balance, iMveliso yoShishino, iMveliso yoMveliso, uTyalo-mali lwezoShishino lwe-Prelim, kunye neSalathiso seeNkonzo ezichazwe kakubi kunamanani alindelekileyo.
I-GBP / JPY iye yaphunyuka kumzimba we-pitchfork ehlayo emva kokufumana inkxaso engaphantsi kwe-61.8% yezinga lokubuyisela. Ngexesha elifutshane, inokubuya ivavanye kwaye iphinde ivavanye i-61.8% kunye nomgca osezantsi wetshaneli phambi kokutsibela phezulu.
Ukutsiba kunye nokuzinzisa ngaphezu kwe-152.85, ukuphakama okuphezulu okutsha kunokuvuselela ukukhula okunokwenzeka. Ijelo elisezantsi langoku lingamela ipateni ebuyela umva. Ngokobuchwephesha, kuphela i-low low low, ukuvalwa kwe-bearish ngezantsi kwe-152.37 kwaye ngaphantsi komgca we-downside kungenza kusebenze ukuhla okunzulu kwaye kunokwenza ukuba imeko ingabikho.
Ukuhlala ungaphezulu kwe-61.8% yenqanaba lokuphinda ulandele kunye nokubhalisa ukuphakama okuphezulu okutsha kunokubonisa ukukhula okungaphaya.
tags Forex, IGBP / JPY, Uhlalutyo Technical
I-GBPJPY Bearish Pickup iyaqhubeka njengoko iiBulls zibamba i-Pullback yeMarike
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPJPY-Novemba 12
I-GBPJPY i-bearish pickup iyaqhubeka njengoko iinkunzi zenkomo zibamba imarike nge-pullback. Amandla exabiso sele eqalile nge-rally eqinile ye-bearish ezantsi emva kokuguqulwa okubukhali kwinqanaba elibalulekileyo le-158.200. Iinkunzi, ebezifudula zifumene umfutho obonakalayo, ziye zaphelelwa ngamandla kweli nqanaba. Iibhere ziyaqhubeka kwindlela yazo, zizisa ukunyakaza kwexabiso kwi-downtrend, ukutshitshisa inqanaba lexabiso le-153.100. Nangona kunjalo, iinkunzi zeenkomo zifuna kwakhona ukubuyisela amandla kwaye zilungele ukubamba ukunyakaza kwexabiso emva kwinqanaba elibalulekileyo le-153.100. Emva kolu tshintsho, silindele ukulungiswa kwexabiso njengoko imarike ekugqibeleni iya kuqhubeka nokuhla kwayo.
Amanqanaba okumelana: 158.200, 153.100
Amanqanaba enkxaso: 151.100, 149.100
Ngokufanayo, imakethi yabona ukuhla okucwangcisiweyo ngaphambi kokuphindaphinda okukhulu kwe-bullish. Imarike idibanisa ukuya ezantsi, iphula amanqanaba abalulekileyo. Nangona kunjalo, phakathi kwe-153.100 kunye ne-149.100 amanqanaba abalulekileyo, iibhere kunye neenkomo zazinokuhlanganiswa okuqinileyo. Abathengi kunye nabathengisi bobabini babe negalelo elikhulu ngokubeka umboniso wamandla. Oku kubonisa ukuba bobabini bazinikele ekuhambiseni imarike kwindlela abayikhethileyo.
Abathengi be-GBPJPY bathathe ngempumelelo emva kokoyisa amandla emarike yeebhere. Iinkunzi zenkomo zenze ngempumelelo ixabiso lentengo liye kwinqanaba elibalulekileyo le-158.200 emva kokubetha amanqanaba amaxabiso amaninzi. Xa iinkunzi zenkomo zingaphumeleli ukutyhala ixabiso ngaphezu kweli nqanaba, iibhere zangena emarikeni zasebenzisa umsipha wazo ukuqhuba ixabiso eliphantsi. Njengoko i-histogram ebomvu iqhubeka nokudala ukunyuka kwexabiso lentengo, i-MACD (i-Moving Average Convergence kunye ne-Divergence Indicator) ngokufanayo ihambisa intshukumo ezantsi. Njengoko sibona kwangaphambili ukuhla, i (Relative Strength Index) i-RSI iphinda ibonise ukuzimisela kwe-bearish, ukuthoba kwi-bear 'ukugcina isantya semarike.
Kwitshathi yeeyure ezi-4, iqhubela phambili kwifomathi ye-downtrend, kwaye intshukumo yexabiso lenkunzi yenkomo ilungele ukubanjwa. Ixabiso ekugqibeleni liya kuhla kufutshane nenqanaba elibalulekileyo le-153.100. Emva kokuphuma kweli nqanaba, ngoko ke, silindele ukuba iinkunzi zenkomo zibuyisele umva intshukumo yexabiso kule nqanaba ngaphambi kokuqhubeka kweebhere. Imarike ekugqibeleni iya kufumana amandla okwaneleyo ukuhambisa amaxabiso kwi-downtrend. I-RSI iphinda ibonise ukubanjwa kweenkunzi zeenkomo njengoko silindele ukutsalwa kwinqanaba lexabiso le-153.100 ngaphambi kokuqhubeka kwe-bearish.
I-GBPJPY ilungele ukuphuka ngaphantsi kweNqanaba eliBalulekileyo Nangona iinkunzi zibambe umva.
Uhlalutyo lwe-GBPJPY- ixabiso lilungele ukuphuka ngaphantsi kwe-153.100 iNqanaba eliBalulekileyo
I-GBPJPY ilungele ukuphuka ngaphantsi kwe-153.100 inqanaba elibalulekileyo nangona iinkunzi zeenkomo zizama ukuthintela ukuqhubeka kweemarike. Ukulandela ikhefu kumanqanaba abalulekileyo angama-156.100, isigaba seebhere saqina. Eli linqanaba lexabiso elikhulu elivumela intshukumo yexabiso ukwakha ukuthengiswa kwemali ngaphambi kokuba urhwebo lube phantsi. Nangona kunjalo, iibhere ezisazimisele ukuqhuba imarike isezantsi kufuneka zoyise amandla eenkunzi kwimarike phambi kokuba kubekho ukuhla okungaphezulu.
Amanqanaba okumelana: 156.100, 153.100
Ixabiso le-GBPJPY ekuqaleni libonwe ukurhweba ngaphantsi ukusuka kwinqanaba lexabiso le-156.100, elibonisa ukuhla okuphawulekayo. Imakethi iphuhlise ipateni yamanqanaba asezantsi kunye nomgangatho ophantsi, ophula amanqanaba amaninzi abalulekileyo kwinkqubo. Ixabiso liphule inqanaba elibalulekileyo le-153.100, lehla kwinqanaba lexabiso le-151.000, kwaye liphinde liyibuyisele ngaphambi kokuwa. Imarike ekugqibeleni yathengiswa kwinqanaba eliphambili le-149.100, elikwayinto ebalulekileyo, emva kokuvavanya kwakhona.
Nangona kunjalo, kwakukho utshintsho ngokukhawuleza kwintshukumo yexabiso, kwaye endaweni yoko, iinkunzi zeenkomo zazama ukubangela ukutsalwa kancinci, kwaye ekugqibeleni zathatha ixabiso phezulu ngaphezu kwezinga elibalulekileyo le-156.100. Iinkunzi zenkomo zidibene nomfutho we-bullish nangona imarike ikwi-bearish trend. I-GBPJPY iqhubekile nokuhamba kwayo kwi-bearish ukuya kwinqanaba elibalulekileyo le-153.100 kwaye iya kuhamba ngaphantsi koko njengoko ixabiso linyuka. Isalathisi se-Stochastic Oscillator sisekummandla we-0.00 sibonisa ukuba abathengi bamiselwe ukukhupha imarike emva kokuqhubeka kwe-bearish.
Ukuhamba kwexabiso kwi-chart ye-4hour kubonisa indlela yemarike yangoku kunye nendlela imarike etshintshile ngayo kwiinkunzi zeenkomo ukuya kwiibhere. Iibhere ngoku zilungele ukuxhasa ukunyakaza kweemarike ezisezantsi, ngelixa iinkunzi zenkomo ziza kuzama ukugcina uzinzo lwexabiso. Njengoko iinkunzi zenkomo zilungiselela ukutsala umva, ixabiso sele liqhekezile kwi-bollinger band, libonisa umqondiso ongalunganga jikelele. I-Stochastic Oscillator iphinda ibonise umnqamlezo, ebonisa ukuba i-pullback inokwenzeka kwaye iibhere zizimisele ukuthatha amanyathelo amaxabiso ngaphantsi kwe-153.100 uphawu olubalulekileyo.
I-GBPJPY iyala i-28 kaMeyi ukuphakama kwakhona!
Inkxaso ephambili: 156.00 - 155.75
Ukuchasana okuphambili: 157.00 - 158.20
Emva kokuphuma kwinqanaba le-156, i-GBPJPY ikhuphe i-1.65% ukusuka kwinyanga edlulileyo ukuvavanya kwakhona eli nqanaba langaphambili eliphukileyo ngamaxesha e-3 ngelixa ushicilela iphethini yokuqhubeka ecacileyo.
I-JPY isathengiswa kakhulu apha kodwa ngoku iphinda idibanise emva kwenyanga edlulileyo -4.70% intshukumo eyenza oku kuqhambuka kwi-GBPJPY.
Umbono wam wokurhweba apha lutshintsho olulula kwinqanaba le-156 emva kokuvulwa kweCawa ngekhefu lexesha eliphakamileyo lanamhlanje.
I-GBPJPY iya kuqhubela phambili ngamandla eBullish
Uhlalutyo lwe-GBPJPY-Ixabiso liza kuqhubela phambili ngaphezulu kwe-155.800 iNqanaba eliBalulekileyo leXabiso
I-GBPJPY iya kutyhala ngaphezulu kwe-155.800 inqanaba lexabiso elibalulekileyo. Imarike iqalile ngamandla e-bullish kwaye ngoku ibonakala iqokelela. Oku kuqokelelwa kwexabiso kujongana neengxabano zabathengi kunye nabathengisi. I-GBPJPY, ilandela esi sigaba sokungagqibeki, ekugqibeleni iya kunika indawo yokuhamba kwexabiso ukuhamba ngendlela ecacileyo. Nangona kunjalo, imarike kulindeleke ukuba iqhube ngakumbi xa ixabiso lifumana amandla amaninzi kwinqanaba le-bullish.
I-GBPJPY Amanqanaba Abalulekileyo:
Amanqanaba aphambili okuchasana: 155.800, 153.100
Amanqanaba aphambili enkxaso: 150.700, 149.100
I-GBPJPY yaqala intshukumo yexabiso layo emva kwexesha elide lokudibanisa. Imarike idityaniswe ngaphaya koluhlu lwe-151.100 kunye ne-149.100 yamanqanaba exabiso. Singatsho ukuba imarike yaqala uluhlu lwayo ukusuka phakathi ku-Agasti ukuya ekuqaleni kukaOktobha ngaphambi kokuba iinkunzi zenkomo zithathe. Abathengi, nangona kunjalo, baqala umkhwa wabo we-bullish nge-pin bar eyomeleleyo, kwaye intengiso emva koko yathatha i-uptrend.
Iziphatho zamakhandlela ezenziwe zaqhekeza amanqanaba ahlukeneyo amaxabiso abalulekileyo ngaphambi kokuba zihlangane ukuya kuthi ga kwinqanaba lexabiso elibalulekileyo le-155.800. Ixabiso liye lahambisa iipips ezahlukeneyo kwaye liqala ukuqokelela ngenxa yezikhundla zabathengi kunye nabathengisi. Kuba imakethi ithanda indlela ye-bullish, ixabiso linokuthi liqhubele phambili emva kokufumana ukunyuka kwexabiso. Iqela leBollinger libonisa ibhendi ephakathi elungele ukuphinda isibane sesibane esiza kuyo njengoko ixabiso lizuza amandla angakumbi.
Itshathi yeeyure ze-4, nangona kunjalo, ibonisa ukuhamba kwexabiso ukuphula amanqanaba ahlukeneyo abalulekileyo. Iinkunzi zeenkomo kunye neebhere ziyaqhubeka zinika intsingiselo yazo kwimarike. Ukulandela ukuqokelela, imarike ke ngoko kulindeleke ukuba iqhube ngaphezulu kwe-155.800 inqanaba lexabiso elibalulekileyo. Isalathisi se-MACD sibonisa amaxabiso alungele ukuwela inqanaba le-0.00, ebonisa isigaba senkunzi kwimarike. Nangona kunjalo, i-Bollinger Band isabonisa amaxabiso enza ukucudiswa kancinci ngaphambi kokuba intengiso iphumelele. Ke ngoko, imakethi iya kuthi ekugqibeleni iqhube ngakumbi njengoko ifumana amandla.
I-GBPJPY iyala i-156 ngelixa i-JPY iphula iflegi ye-bearish
Inkxaso ephambili: 156.00 - 156.40
Ukuchasana okuphambili: 157.40 - 158.20
I-GBP iye yaxabisa i-6.25% ngokubhekiselele kwi-JPY kwi-bearish breakout enkulu kwicala le-JPY Yen kwiiveki ezi-2 ezedlulileyo. Inqanaba elalifakela phezulu kule marike yayiyi-156.00 (i-Jan. 2021 highs).
Emva kokuba i-GBPJPY iphule kunye nesakhiwo se-pullback kunye ne-156.00, ndilinde i-pullback ukuya kweli nqanaba ngokude okutsha ukongeza kum sele ndikwindawo yenzuzo ye-700 pips +). Ulwakhiwo lwe-bearish olukhawulezileyo (iflegi) lusadlala kwaye kungade kubekho ukuqhambuka okuqinisekileyo okude kuya kudlalwa.
I-JPY ngakolunye uhlangothi ihoxise i-1.75% ukusuka kwi-21 ye-Oct.
Kwiimfutshane apha ndifuna ukubona ikhefu elicocekileyo lee-lows zangoLwesihlanu wokugqibela eziya kubangela ezo zide ze-GBPJPY.
← Entsha izithuba1 2 ... 8 abaDala izithuba →